ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး - Page2of 8 - Vision/ Aim - To empower youths to become leaders and establishanew society based on the principles of freedom, equality, justice and peace.
“ကျွန်ုပ်တို့၏ မြေယာ” အစီရင်ခံစာ စာအုပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
Thank you to UNOY
အခွန်ဦးစီးဌာန ဦးအောင်ကိုနှင့် အဖွဲ့ “အခွန်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ လာရောက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခြင်း”
ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) ဖွင့်လှစ်မည့် အဆင့်မြှင့် နိုင်ငံရေးသင်တန်း
10/ July/ 2019 ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပုံလောင်းကျေးရွာ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုးရေးကွင်း(ပုံလောင်း)မှာ တောတောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲ နှင့် စုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ဟောပြောပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသော ဒေသခံများမှာ နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု ရွားများနှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်မှ ရွာများအချို့တက်ရောက်လာကြပြီး၊ ရွာပေါင်း (၄၆) ရွာ၊ တက်ရောက်သူ (၇၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါ သည်။ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပျိုးပင်ပေါင်း (၂၂၀၀) ကျော်ဖြစ်ပြီး ပျိုးပင်အမျိုးအစားများမှာ ရွှေဝါး၊ ခါတော်မီ၊ […]
Posted in Activities, NewsTagged , Environment DayHH environment dayPFDU and PYO plantingစုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲLeaveacomment
6/ July/ 2019 ရက်နေ့ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ၊ တီကျစ်ဒေသ ဗန်းမက်ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO)မှ ဦးစီးပြီး ဒေသခံများနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကို ဗန်းမက်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဟောပြောပွဲတွင် ဆောင်ပုဒ် (၃) ခုဖြင့် ဟောပြောသွားခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဝါးပိုးပင်၊ ရွှေဝါးပင်၊ ဝက်သစ်ချပင်၊ ချယ်ရီပင်နှင့် အခြားသောပျိုးပင်များအပါအဝင် ပျိုးပင်စုစုပေါင်း (၆) မျိုး အပင်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ကို ဗန်းမက်ကျေးရွာ ရေထွက်ဦးအနီးတစ်ဝိုက်နှင့် ဗန်းမက်ရွာ ဧရိယာတွင် စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။
Posted in Activities, NewsTagged , Ban Mark VillageEnvironment Dayစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲပင်လောင်မြို့နယ် ဗန်းမက်ရွာပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး အစီရင်ခံစာ စာလုပ်Leaveacomment
5/ July/ 2019 ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO)မှ ပင်လောင်းမြို့၊ နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ၊ ဗန်းမက်ကျေးရွာတွင် Tigyit Coal Mining & Coal Power Plant Area Community Gathering အသိပညာပေး ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသခံများ (၃၀) ကျော်ဖြင့် ဗန်းမက်ရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Posted in Activities, NewsTagged , Ban Mark VillageCoal mining and coal power plantNo coal miningpin longpyo no coal miningLeaveacomment
သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် “ကူညီပါ – အပြစ်မပေးပါနဲ့” ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၆ ရက် တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမ၀င်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့အား ဦးတည်၍ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO)နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမူဝါဒပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ (DPAG) တို့ပူး ပေါင်းကာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်သောလူငယ်များ၊ ဘိန်းစိုက်တောင်သူများ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်များ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲနေသောလူငယ်များအား အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်းထက် ကူညီခြင်း […]
Posted in Activities, NewsTagged , Drug CampaignPYO and DPAGstatementSupport Don't Punish Drug Statementသဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်Leaveacomment
၂၅ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတွင် “ ကူညီပါ အပြစ်မပေး ပါနဲ့” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် Pa-O Youth Organization (PYO), Transnational Justice (TNI), Drug Policy & Advocacy Group (DPAG – Myanmar) တို့ပူးပေါင်းပြီး လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကို တောင်ကြီးမြို့၊ ဇိန်ဂျိုးဇက် အောက်မေ့ဘွယ်ဓမ္မာရုံ ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဟောပြောပွဲတွင် CSOs […]
Posted in Activities, NewsTagged , CampaignDPAGDrug CampaignPYOPYO Drug CampaignTNI Drug Campaignလူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲLeaveacomment
21-22, June, 2019 ခုနှစ်တွင် ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ညီလာခံတွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးမည်၊ ညီလာခံကို မည်သည့်နေရာတွင် ကျင်းပမည်၊ မည်သူက မည်သည့်အပိုင်းတွင် တာဝန်ယူမည်နှင့် ကျင်းပမည့်အချိန် တို့ကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရေုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး အစည်းအဝေး (Shan State Ethnic Youth Meeting)ကို တောင်ကြီးမြို့၊ True Treasure Hotel တွင် (၂) ရက်တာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် […]
Posted in Activities, NewsTagged , Ethnic Youth in Shan Stateethnic youth meetingShan State Ethnic Youth Meetingyouth meetingရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး အစည်းအဝေးLeaveacomment
၂၇-၂၈ ရက်နေ့၊ မေလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) သင်တန်းခန်းမတွင် Basic of International Humanitarian Law (IHL) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ICRC (International Committee of the Red Cross)နှင့် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး ICRC (International Committee of the Red Cross)က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသား၊ သူ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၂၅) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]
Posted in Activities, NewsTagged , Basic of International Humanitarian Law (IHL)ICRCICRC (International Committee of the Red Cross)ICRC with PYOIHL lawLeaveacomment
PYO ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး လွယ်မော်တောင်သို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ နားခဲုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင်အွဉ်း၊ ထမ်းယမ်းရွာအနီးရှိ ကောင်တန်လွယ်မော်သို့ 2019 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ 27-28 ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးအဖွဲ့များသွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ ဧပြီလ၊ 27 ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် ပင်အွဉ်းရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ကောင်တန်လွယ်မော် တောင်ပေါ်သို့ ခြေလျင်ဖြင့်တက်ကြပြီး နေ့လည် (၁၂း၁၅) မိနစ်တွင် စေကင်ထိပ်ပေါ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပြီး လွယ်မော်တောင်၏ သမိုင်းကြောင်းများ လေ့လာခြင်း၊ စုပေါင်းဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်းနှင့် မွန်းလွဲ […]
Posted in Activities, NewsTagged , Loi Maw Mountainloi maw tripPYO Loi Maw Trippyo loimaw trippyo member loimaw tripLeaveacomment
ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO)၏ သုတေသနဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်း 26 April 2019 ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့၊ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံးမှ ဦးစီးကျင်းပသော သုတေသနဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းကို 2019 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ 26 ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး၌ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းကို ဒေသစုံလူငယ်များတက်ရောက်ပြီး သင်တန်းတွင် 1. Basic Human Rights and Environmental 2. Governmental and Democracy 3. Drug Education 4. […]
Posted in ActivitiesTagged , ats researchATS research trainingDrug Education trainingdrug researchpyo researchresearchresearch trainingLeaveacomment
လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ပင်လုံမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ သွားရောက်ကန်တော့ သြဝါဒစကားခံယူခြင်း
2019 ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလတွင် ပအိုဝ်း လူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) အဖွဲ့ဝင်များ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ပင်လုံမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ သွားရောက်ကန်တော့ သြဝါဒစကားခံယူခဲ့ကြပါသည့် ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ….. photo by: PYO
Posted in Activities, NewsTagged , 2019 PYO လှုပ်ရှားမှုများPYO 2019 ပင်လုံခရီးစဉ်ပင်လုံမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ သွားရောက်ကန်တော့ခြင်းလွိုင်လင်ခရိုင်၊ ပင်လုံမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ သွားရောက်ကန်တော့ သြဝါဒစကားခံယူခြင်းသင်္ကြန်ကာလ PYO လှုပ်ရှားမှုများLeaveacomment